ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးပမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးပမ်း
Posted by ကထူးဆန္း on Jun 15, 2012 in Copy/Paste | 16 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်ချခံထားရာမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံမှ ဥရောပသို့ သွားရောက်လျက်ရှိရာ ကြိုဆိုပွဲများ၊ မိန့်ခွန်းပြောဆိုမှု့များ ဆက်တိုက် တက်ရောက်ရသည့် အတွက် ခရီးပန်း ပြီး နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်လာကြောင်း7days news face book တွင် ဖတ်ရှုလိုက်ရပါသည် ။
Ps. သူကြီးရေ .. Forum က မမြင်ရတော့ သတင်း အတိုလေးတွေ ရေးတင်ရတာ အားနာမိပါသည်။
ကြားရတာ တကယ်စိတ်မကောင်းဘူး ကထူးဆန်းရေ။
ဟောပြောစင်ပေါ်မှာ ကို အန်တာ တဲ့။
ဓာတ်ပုံ လဲ တွေ့ရတယ်။ :-(
အဲဒီ ခရီး က ၁ဝနာရီလောက် လေယာဉ်စီးရတာ။
သာမာန် လူတွေတောင် ပင်ပန်းတာ။
သူက စိတ်လဲ ပင်ပန်းနေမဲ့ လူဆိုတော့ ပိုဆိုးမှာ။
နောက်ပြီး အချိန် ကွာဟချက် လဲ ရှိမယ်။
ရန်ကုန် မှာ အိပ်ရတော့ မဲ့ အချိန် က အဲဒီမှာ နေ့ ဖြစ်နေသေးတာကိုး။
စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာ တဲ့ သူမို့ မကြာခင် ကောင်းသွားမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီ Post ကို လက်မ တော့ မထောင်ချင်ဘူး။ ခွင့်လွှတ်ပါ။
အန်တီကြီး သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေခင်ဗျား..
ဒီနေ့ ရွှေဘုံသာလမ်းမှာ အလှုငွေသွားယူတုန်း အမေစု စကားပြောနေတာ ခဏ နားထောင်ခွင့်ရလိုက်တယ် ။ ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်မိသလားတော့ မသိဘူး ။စာရွက်မကိုင် တစ်လုံးခြင်းပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ လူတိုင်း နားလည်အောင် ပြောနေတာဟာ မာဂရက်သက်ချာတို့ တိုနီဘလဲတို့ထက်တောင် အပြောကောင်းနေသလိုဘဲလို့။
ဒီနိုင်ငံ ထဲ မှာတောင် ကင်မရွန်တို့၊ နစ်ကလက်ဂ်တို့ အတုခိုး သင့်တယ် ပြောနေကြပြီ။
တကဲ့ ကို ဂုဏ်ယူစရာပါဘဲ။
အဲဒီရက် တော့ ကျွန်မ လဲ အလုပ်မှာ ဝင့်ဝင့်ကြီး နေရတော့မှာ။ 8-)
ဆြာအူးလေးကိုကိုထူးယေ ဒေါ်သက်ချာကြီးကတော့ အပြောမကောင်းဘူး အလုပ်ပြတ်တာဗျ ကျုပ်တို့ အန်တီကြီးလည်း တော်ကီတွေထက်စာရင် တခါတလေ ပြတ်သားဖို့လို လိမ့်မယ်တော့ မြင်မိတယ်။ ဒေါ်သက်ချာကြီး အကြောင်းပြောလို့ သူ့ကိုတော့ မမှီလိုက်ပါဘူး သားက ဟိုတလောကမှ အိုင်းယွန်းလေဒီ ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ကြည့်ဖူးလို့ပါ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၁ဝပါဘဲ ကိုယ့်ဆြာရယ်…
ဒေါ်စု ကျန်းမာစေကြောင်း မေတ္တာဘာဝနာ ပွားပေးပါမယ်။
ဒို့ကြီးမေရဲ့ ဘေးနားက လိုက်သွားတဲ့သူကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်။
လူတကာတွေက လိုအပ်ရင် ရခိုင်လို နေရာမျိုးလည်း သွားနိုင်တယ်ပြောနေပေမယ့်…
ကိုယ့်သတ္တိက ဒုန်းဒုန်းဒိုင်းဒိုင်း (ဗျောက်အိုးဖောက်သံ) ကြားရင်တောင် ရင်တုန်ပမ်းတုန်မို့…
ဒါပေမယ့် ကိုယ်လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ ကြီးမေကို အနီးကပ်ပြုစုခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမဆို လုပ်ပေးလိုက်ချင်သား။
အမေစုကျန်းမာပါစေလို့ပဲအဝေးကဆုတောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြားရတာစိတ်တောင်မကောင်းဘူး။ ဆိုင်ရာ နိုင်ငံကဆရာဝန်တွေကတော့ ပညာရည်ပြည့်ဝတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုပဲ တာဝန်ပေးကြည့်ရှု့လိမ့်မယ် လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ အရီးလတ်ရေ အရီးတို့ဆီရောက်ရင်လဲ ဂရုစိုက်လိုက်ပါအုံးနော်။
အမေစု အမြန် နေကောင်းကျန်းမာပါစေ။ အမေစု ဖြစ်စေချင်တဲ့ အရာအားလုံး အမြန်ဆုံး ဖြစ်မြောက် အောင်မြင်ပါစေ။
ကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာ မတည်ငြိမ်တာကိုတောင် ငဲ့စောင်းမကြည့် ၊ ဘာတခုမှ ပြတ်ပြတ်သားသား မပြောနိုင် မှတ်ချက်မပေးတာတွေမြင်နေရတော့ တော်တော်ကိုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရပါတယ်။ အခု ရိုဟင်ဂျာတွေက AFP ကိုပြောပြီလေ.. ၁၉၉ဝထဲက ဒေါ်စုမဲရရှိရေးနဲ့အောင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုလုပ်ပေး ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။
အဲဒီတော့ လူထုခေါင်းဆောင်ကြီး ရခိုင်ဒေသအရေးမှာဘာလို့ခေါင်းရှောင်ပြေးလဲဆိုတာ အောက်မှာသာဖတ်ကြည့်ကြပါတော့..
BANGKOK: Sectarian unrest rocking Myanmar has put Aung San Suu Kyi under pressure to speak up for the stateless Rohingya, but experts say the issue isapolitical minefield given ethnic and religious divides.
The Nobel laureate, onalandmark visit to Europe, was repeatedly asked by reporters Thursday about the clashes between ethnic Rakhines and the Rohingya that have left dozens dead and more than 30,000 displaced.
Speaking in Geneva, on her first trip to the continent since 1988, the veteran activist stressed “the need for rule of law”, adding that without it “such communal strife will only continue”.
But her carefully chosen comments fell short of offering strong support to Myanmar’s estimated 800,000 Rohingya, described by the United Nations as one of the world’s most persecuted minorities, and she is on the horns ofadilemma.
Myanmar’s government considers the Rohingya to be foreigners, while many citizens — including the local Rakhine population — see them as illegal immigrants from neighbouring Bangladesh and view them with hostility.
“Our appeal is to the UN, foreign nations, the Myanmar government and especially to Suu Kyi,” Mohammad Islam, leader of Rohingya refugees living inacamp in the Bangladesh border town of Teknaf, told AFP on Wednesday.
“Aung San Suu Kyi hasn’t done or said anything for us, yet the Rohingya including my parents campaigned for her in the 1990 elections.”
Experts say the issue is fraught with political danger for Suu Kyi as she tries to build her credentials asaunity figure who can represent Myanmar’s myriad minority groups as well as the democratic opposition among the majority Burmese.
If she fails to tackle the subject she risks disappointing those who “crave her leadership” he said — yet support for the Rohingya “risks alienating some Burmese” who fear Myanmar’s minorities will gain growing influence.
The question threatens to overshadow her return to the world stage after 24 years inside Myanmar — much of it under house arrest — more so as on Saturday she will deliver her long-awaited Nobel Peace Prize lecture.
Suu Kyi was imprisoned in her Yangon villa by Myanmar’s generals at the time of the 1991 award, which cemented her place and the nation’s democracy cause in the global spotlight.
The latest bloodshed has raised fears for Myanmar’s fragile reform process, which has propelled Suu Kyi from prisoner to parliamentarian in under two years.
UN rights envoy Tomas Ojea Quintana has said the Rakhine unrest posesathreat to the country’s shift towards democracy, echoing earlier warnings by President Thein Sein that the country’s “democratic process” could be damaged.
“She (Suu Kyi) may stay on the wider issues of human rights without directly tackling the political issue.”
Some of her own allies have expressed suspicion of the Rohingya, with certain key figures in Myanmar’s pro-democracy campaign openly speaking out against the minority.
“We want to say clearly that Rohingya are not our ethnic race,” said Ko Ko Gyi,aprominent former political prisoner and student leader involved inafailed uprising in 1988, rejecting their claim to be indigenous to Myanmar.
After violence erupted on June 8 inaRohingya-dominated town, the NLD issuedastatement lambasting those responsible for the “terrorist attack”.
The lack of significant support from Suu Kyi and other prominent pro-democracy activists in Myanmar has left Rohingyas living in refugee camps in neighbouring Bangladesh in despair.
“Like most other Burmese people, she is silent about the rights of Rohingya,” Islam said.
အချိန်က ဘယ်သူမှားလည်း မှန်လည်း အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
ပေးသင့် တဲ့ အချိန်လား မပေးသင့်တဲ့ အချိန်လားဆိုတာကို အားလုံးရဲ့(နှစ်ဘက်စလုံးရဲ့) ဖိအားများကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာ ကို မြင်နိုင်ကြပါစေ။
ကိုယ့်လိုဘ တစ်ခု မရတာနဲ့ အပြစ်တင်သင့်သလား ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စဉ်းစားကြပါ။
မြန်မာ.. အနောက်ဖက်ကမ်းရိုးတန်း ပြသနာတွေမှာ.. ဒီထက်မကလေးနက်တဲ့.. ကစားကွက်တွေရှိတယ်..
ကြားထဲက.. မျိုးချစ်စိတ်.. လူမျီုးရေးစိတ်.. ဘာသာရေးစိတ်တွေ.. အစွန်းရောက်ပြီး.. သူများအသုံးချမခံကြဖို့ပဲ..
သာမန်လွယ်လွယ်ပြောရရင်.. ကိုယ်ရေးမယ်.. ပြောမယ်ဆို..ကော်ပီကူးမယ်ဆို.. သေသေချာချာတွေးပါ..စဉ်းစားပါ..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က.. အိန္ဒိယမှာကြီးပြင်းတယ်..။(( အိန္ဒိယဆိုတာ.. ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်..ပါကစ်စတန်(သူ့ဆီက ဘာသာရေးကြောင်းအရခွဲထွက်ခဲ့တဲ့) နိုင်ငံတွေနဲ့..အဆင်မပြေတဲ့..နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်.))
တိဗက်ဗုဒ္ဓဘာသာကို.. ဒေါက်တာ..ပါမောက္ခအဆင့်.. နဲ့သေသေချာချာလေ့လာဖူးတယ်..
တိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်းနားလည်တယ်..( အဖိုးအဖွားတွေက.. ချင်း..ကရင်.. တိုင်းရင်းသားသွေးပါသူတွေ)
ဘာသာရေးတွေအကြောင်းနားလည်တယ်.. ( အမေဖက်က.. ခရစ်ယန်အနွယ်တွေ)
တိုင်းပြည်အပေါ်.. အသက်နဲ့ရင်းပြီး.. စေတနာ..သစ္စာရှိတယ်.။ (မျိုးရိုးလိုက်)
မြန်မာလူထု.. လူထုခေါင်းဆောင်နောက်က.. တည့်တည့်လိုက်ပါ..။
အမေစု နဲ ့ပတ်သက်လာရင် သတင်းတိုတို ရှည်ရှည် တင်ပေးပါဗျာ ။
အမေစု ကျန်းမာချမ်းသာစွာနဲ ့ပြည်သူားအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။
သစ်ထူးလွင်ဆိုက်က ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်လိုက်ရတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဝံ့ကြွားတဲ့ခြေလှမ်း၊ ပွင့်လင်းတဲ့ပြောဆိုမှုတွေကို မြင်လိုက်ရတာ တကယ်ကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်သွားမှာကို အရမ်းလည်း စိုးရမ်မိတယ်။
ကျန်းမာစွာနဲ့ နိုင်ငံအကျိုးကို ဆက်လက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေ…
မမကတော …..ပြီး……….ကျန်မာပါစေ…..ချမ်းသာပါစေ 10ပေးပါဗျို့